Saturday December 22, 2018 - 14:39:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa shaqa joojin kujira howllihii shaqo ee xukuumadda Federaaliga Mareykanka kadib markii kuwa sharciga mareykanku uu ku dhaqmo sameeya ay diidmo adag ka muujiyeen qarashaadkii ay dowladdu ku shaqeyn laheyd.
siyaasiyiin American ah ayaa aaminsan in Trump uu qarka ka tuurayo Mareykanka
Golayaasha Koongareeska iyo Senedka Mareykanka ayaa diidmo adag ka muujiyay ansixinta miisaaniyada xukuumadda taas oo keentay in uu hakad ku yimaad adeegyadii ay dowladda Mareykanka siin jirtay muwaadiniinteeda.
Donald Trump ayaa sheegay in xirnaashiyaha xukuumadda uu saameyn ku yeeshay khilaafka ka dhashay miisaaniyadda ku baxaysa dhismaha darbiga laga dhisayo xuduudda kala qeybiya wadamada Mexico iyo Mareykanka.
Warbaahinta dowladda Mareykanka ayaa dhacdadan si aad ah u hadal heysa waxayna arrintan imaanaysaa xilli Donald Trump uu soo saaray go'aamo uu ciidamadiisa ugasoo saarayo wadamada Afghanistan iyo Suuriya.
Maleeshiyaad daacad u ahXukuumadda Dubai oo qabsaday gobolka Abyen.